Apple Oo Daaha Ka Qaaday Sifooyin Helitaanka Cusub Oo Cusub Oo IOS Ah | IPhone News
Angel Gonzalez | 20/05/2022 17:00 | macruufka, Noticias
Apple ayaa had iyo jeer lahaa go'aan aad muhiim u ah helitaan ee alaabteeda iyo nidaamyada hawlgalka. Dhab ahaantii, sannadba sannadka ka dambeeya, WWDC waxay had iyo jeer u huraysaa meel bannaan si ay u sahamiso waxyaabaha cusub ee gelitaanka nidaamyada hawlgelinta. Shalay ayaa la xusay Maalinta Wacyigelinta Gelitaanka Adduunka iyadoo Apple ay u hibeysay war-saxaafadeed ku dhawaaqo astaamo cusub oo ku jira nidaamyada hawlgalka kuwaas oo iman doona dhamaadka sanadka. Waxaa ka mid ah kuwa cusub ee aan leenahay ogaanshaha albaabka ee isticmaalayaasha muuqaalkoodu hoos u dhacay, Apple Watch Mirroring ama qoraal-hoosaadyo toos ah. Waxaan kuu sheegaynaa.
Maalinta Wacyigelinta Gelitaanka Adduunka iyo Nidaamyada Hawlgelinta Apple
Astaamaha Softiweerka ee imanaya dabayaaqada sanadkan waxa ay siiyan isticmaalayaasha naafada ah qalab cusub oo loogu talagalay hagidda, caafimaadka, xidhiidhka iyo wax ka badan.
Iyadoo loo marayo war-saxaafadeed ballaaran. Apple waxay rabeen inay ku dhawaaqdo dhammaan wararka ku saabsan gelitaanka nidaamyada hawlgalka ay. Astaamahan cusub waxay gaari doonaan isticmaalayaasha dhamaadka sanadka iyada oo la socota cusbooneysiinta soo socota ee aan ku raaxaysan karno WWDC22, oo ay ku jiraan iOS iyo iPadOS 16.
Bogga cusub ee marin u helka Apple wuxuu muujinayaa faa'iidooyinka macruufka iyo iPadOS
Si ballaaran, Apple waxay u hibeysay dadaalkeeda afar astaamood oo cusub:
Ogaanshaha albaabka: Horumarinta software iyo barashada mashiinka, isticmaalayaasha indhoolayaasha ah ama araggoodu hooseeya waxay awoodi doonaan inay ogaadaan albaabada. Intaa waxaa dheer, waxaa la soo gudbin doonaa macluumaadka ku saabsan albaabka laftiisa, haddii uu xiran yahay ama furan yahay, haddii lagu furi karo riix ama furaha. Dhanka kale, isku dhafka LIDAR dareeraha aaladaha ugu dambeeyay ee Apple ayaa tilmaamaya inta mitir ee ay tahay albaabka laftiisa.
Apple Watch Mirroring: Laga bilaabo hordhaca muuqaalkan, isticmaalayaashu waxay awood u yeelan doonaan inay daawadaan Apple Watch shaashadda iPhone oo ay awood u yeeshaan inay xakameeyaan. Waad ku mahadsan tahay amarrada codka, ficillada dhawaaqa, raadraaca madaxa ama furayaasha si gaar ah loogu sameeyay iOS. Thanks to this waxay awoodi doonaan inay ku noolaadaan waayo-aragnimo la mid ah isticmaalayaasha inteeda kale. Waxay adeegsadaan tignoolajiyada AirPlay oo waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxaysato hawl kasta oo saacadda smart ah.
Qoraal-hoosaadyo toos ah: Qoraal-hoosaadyada-waqtiga dhabta ah sidoo kale waxaa lagu dhex dari doonaa codsiyada Mac, iPhone iyo iPad. Tusaalaha tani waxay noqon kartaa wada sheekeysiga iyada oo loo marayo FaceTime. Baaxadda iyo qoraalka far-hoosaadka waa la beddeli karaa, taasoo sahlaysa in la raaco wada sheekaysiga.
Horumarka VoiceOver: Ugu dambeyntii, luqadaha lagu heli karo VoiceOver waa la ballaariyay si loogu daro Catalan, Yukreeniyaan, Fiyatnaamiis, Bengali, iyo Bulgaariya. Codadka cusub ee loo habeeyay mid kasta oo ka mid ah luqadaha ayaa sidoo kale la isku daray. Iyo, dhanka kale, macOS shaqada ayaa lagu daray Hubiyaha qoraalka in aan dib u eegno qoraalka aanu qornay, in la ogaado khaladaadka qaabaynta sida xarfaha waaweyn ee khaldan, laba meelood, iwm.
Apple gabi ahaanba wuu gadoomay Maalinta Wacyigelinta Helitaanka Adduunka oo muujinaysa dhammaan sifooyinkan cusub ee iman doona dhammaadka sannadka. Laakiin waxaa dheer, dhammaan barnaamijyadeeda iyo adeegyadeeda waxay ku dareen waxyaabo gaar ah si loogu dabaaldego maalinta muhiimka ah ee shirkadda: laga bilaabo Apple Books ilaa Apple TV + iyada oo loo marayo Apple Music iyo Apple Fitness +.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » Apple Oo Soo Bandhigtay Tilmaamo Helitaanka Cusub oo Cusub oo loogu talagalay IOS